Ihe Omume Nleta njem nke Kenya Kenya 2019
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ihe Omume Nleta njem nke Kenya Kenya 2019
Inweta njem nleta • Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ezumike na Kenya! Nke a bụ ọkacha mmasị maka ndị njem America na nnukwu azụmahịa maka Kenya Tourism Industry. Onye akaebe na nke a bụ Kenya Tourism Sector Performance Report for 2019. Ọ bụ National Bureau of Statistics wepụtara akụkọ ahụ.
Nwoke a ga-akwụ ụgwọ maka ihe ịga nke ọma ijeri dọla 1.6 nke Afrika Najib Balala, Onye ode akwukwo nke njem nleta na Kenya
Ndị America nwere mmasị ịga Kenya ebe ọ bụ na United States ka bụụrụ isi obodo ndị njem ọdịda anyanwụ kachasị ukwuu maka mba East Africa a, ndị UK, India, China, Germany, France, na Italytali na-esote.
Na 2019 ndị ọbịa 2,048,334 bịarutere Kenya, 1,423.971 rutere Nairobi, na 128,222 na Mombasa. Ndị ọbịa 29,462 rutere n'ọdụ ụgbọelu ndị ọzọ na ndị ọbịa 467,179 bịarutere n'ala.
Na ngụkọta 2018 ndị bịara mbata edere na 2,025,206 - ọ pụtara na Kenya nwere ịrị elu 1.167% na 2019
Banye site na Jomo Kenyatta International Airport na Moi International Airport debara aha nnukwu mmụba nke 6.07% na 8.56% n'otu n'otu ma e jiri ya tụnyere ogo ngụkọta nke 1.167%.
Ebe ntinye ndị ọzọ debanyere aha dara ada karịa nke ukwuu oke ala nwere mbelata mbata nke -12.69%.
Nke a bụ ihe na-egosi na njikọ ikuku ga-anọgide na-abụ isi ihe na-akpata uto nke mbata mba ofesi na Kenya
Ndị ọbịa na-aga ahịa ugbu a site na 1 ruo 20
Afọ ndị ọbịa:
65 na ihe karịrị 4%
63.15% nke ndị ọbịa niile gara ezumike, 13.5% na azụmaahịa, 10.5% gara leta ndị enyi na ezinụlọ,
Kenya njem na njem njem njem na 2019 bụ USD 1,610,342,854 dị mma
4,955,800 akwa ụra rere. Na ndekọ ọnụ ọgụgụ nke 2018 dekọtara 4,489,000.
Kedu otu Ebe Kenya si kwalite?
Mgbasa ozi ntanetị n'ịntanetị na Google,
Ndị ọrụ ntanetị dị ka Zoo Zoo
Aljazeera na CNN Online
Na-aga n'ihu mgbasa ozi mgbasa ozi Digital na Expedia na Tripadvisor na mgbasa ozi mgbasa ozi na ọchụchọ Google.
Mgbasa ozi ahia na ndi otu ahia dika APTA, SATOA, ATTA n'ahia ahia.
Okporo ụzọ ahịa njem na UK, India, USA na China na-egosipụta ahụmịhe na ọrụ nke ndị na-egwu egwuregwu nke onwe ha
Ngosipụta azụmaahịa njem ụwa gụnyere MKTE na Nairobi, ITB Berlin, ITB Asia na Singapore, WTM London, WTM Africa na Cape Town, OTM na India, na USTOA, USA.
• Mgbasa Ozi Domlọ na-akpọ "TembeaKenyaNaMimi" site na TV, nyiwe dijitalụ na redio.
• Ebe omume omume n'ihi na a zuru ụwa ọnụ PR mkpọsa leverage na positives gburugburu ebe eg Kenya Golf Open, NY Marathon na Ineos 1:59 llema Aka.
• Udiri ume ume - “EmbraceMoreMagic”
Ezigbo ihe omume nyeere aka na ọnụ ọgụgụ ndị bịarutere gụnyere na 2019:
• Mmetụta mgbe ị maliteghachi njem ụgbọ elu n'etiti Paris na Nairobi na 2018. Air France na Machị 2019 mụbara ugboro ugboro ụgbọ elu ya site na atọ ruo ise kwa izu. Ahịa ndị France ahụwokwa uto ka ndị ọzọ dịka UK jụrụ.
• Qatar Airways malitere njem ụgbọ elu si Doha gaa Mombasa na Disemba 2018. Nke a tụrụ anya na ọ ga-eje ahịa dị iche iche, Doha bụ isi njikọ njikọ.
• Airlinesgbọ elu Etiopia ụgbọ elu mụbara ugboro ugboro na Mombasa site na ụgbọ elu otu abụọ rue abụọ n'ime afọ.
• TUI na Neos mụbara ụgbọ elu ụgbọelu ha na ọdụ ụgbọ elu mba Moi na-eme ka ndị mbata gafere site na Mombasa
• Mmalite nke ụgbọ elu ndị ụgbọelu Kenya Airways malitere na Nairobi na New York na Ọktọba 2018 enyela aka na mmụba na-aga n'ihu nke ahịa America.
Obodo ahụ gara n'ihu na nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime afọ ahụ. Ọnọdụ njem ndị njem enweela nkwụsi ike ma si na ya nyere aka na uto a.
Ọnọdụ nchekwa ahụ kwụsiri ike n'afọ ahụ site na nkwado gọọmentị na-akwado ya na gọọmentị.
E nwere otu onye na-eyi ọha egwu ọgụ na họtel Dusit2 na Nairobi na mmalite afọ nke metụtara njem nlegharị anya.
Bank World kwuru Kenya maka mkpesa azụmahịa na-egosi na na 2019, Kenya mere ka ọkwa ise dị mma na 56 n'ụwa niile maka ịma mma nke ndị na-etinye ego site na 61 na 2018.
Nke a abanyela n'etiti ndị ọzọ, akpaaka nke sistemụ nke mere ka ịmalite azụmahịa na Kenya dị mfe yana gọọmentị itinye aka na-aga n'ihu na-agbaso usoro iwu siri ike ma melite gburugburu azụmahịa.
Ọganihu e dekọtara dị nwayọ karịa ezubere iche na nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara isi ihe dị n'etiti ha bụ:
Mwakpo ndị na-eyi ọha egwu Dusit d2 na Jenụwarị 2019 na ntinyeghachi nke ụfọdụ ịdọ aka ná ntị ebe njem ebuliri ndụmọdụ na 2018.
• Afọ ego 2018/19 na 2019/20 hụrụ mbelata nke atụmatụ mmefu ego dị maka mmepe njem na ịzụ ahịa.
• Na-agbadata ọsọ ọsọ zuru ụwa ọnụ. UNWTO kwuru na njem na Sub-Sahara Africa n'ozuzu ya na-eto na 1% rue Septemba nke afọ ahụ na ụwa niile, ọnụego uto belata site na 6% na 2018 ruo 4%.
Ndị na-egosi ụwa: Ndị mbata ọbịbịa mba ụwa toro 4% na Jenụwarị-Septemba 2019 ma e jiri ya tụnyere 6% uto edere na 2018, nke kwekọrọ na kwa afọ nke 4% nke afọ iri gara aga (2008-2018).
North Africa toro site na 10% ebe Sub-Sahara Africa toro site na 1% nke dika ntule na ebe Kenya. (UNWTO)
Ndị na-ebugharị Europe gosipụtara ntụgharị siri ike na 2019 nke ọgbọ na-ebugharị ego karịa site na mmemme ọrụ. Na Africa na Middle
N'ebe ọwụwa anyanwụ, okporo ụzọ ndị njem na-eto site na 9.9% kwa afọ. Amerịka depụtara mbupute nke njem ụgbọ elu nke 2.4% kpatara oke ejighị n'aka na ọnọdụ mmekọrịta akụ na ụba na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara akụ na ụba ndị ọzọ. (IATA)
Dabere na UNWTO Tourism Barometer, data sitere na njem 127 nke ụwa maka Jenụwarị-Septemba 2019 na-arụtụ aka na mmụba nke nnata njem njem mba ofesi n'ofe mpaghara. 78% (ebe 99) gara na mmụba nke ego ndị njem mba ofesi jiri tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga, ebe 22% nwetara mbelata
Free Independent Travel na-egosi 36.1% nke ndị nleta mba ofesi na Kenya. Ọ na-ewu ewu n'ihi:
Nnwere onwe nke onwe megidere ịbụ onye 'ekekọtara' na otu ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ onye ọlụlụ.
Ọganihu onwe onye site na ahụmịhe otu ọhụụ.
Chọrọ ịbawanye '' oge m.
Ohere izute ndị ọhụrụ na-abụkarị ndị enyi.
Fọdụ bụ ndị na-eto eto na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na-achọ ihe omume ọhaneze ma ọ bụ ịchọta onye ha ga-alụ.
• widfọdụ ndị agadi di ha nwụrụ na-eji oge ezumike ụlọ ezumike ma ọ bụ njem ụgbọ mmiri dị ka ụzọ ndụ okomoko nke ụlọ ọrụ nlekọta ndị agadi.
Ndị na-enye ndị njem nlegharị anya kwesiri ịbawanye ikike a site na:
• packchụ nchịkọta dịka ọkachamara, ahaziri iche na njem otu
• Gbaa mbọ hụ na nchekwa, ntụkwasị obi yana ebe ntụkwasị obi.
Ihe dị iche iche na-eme ka nke a nwee ume gụnyere:
• Oge Ikpeazụ na-enye na ịntanetị.
• Ngwá ọrụ dị iche iche nke ọnụahịa dị na mkpofu ndị njem.
• reviewsgụ nyocha ndị gara aga 'n'ịntanetị.
Emeela ka ụdị ndị njem kachasị elu. Enwere uche dị ukwuu maka uru maka ego na njedebe maka ọnụego.
Dị maka 2020 na gafere
27% nke ndị ezumike na-achọ ịga njem / mba ọhụrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ (32%) na-atụ anya ileta ebe ezumike ọhụrụ ma ọ bụ obodo nwere ihe ndị ọzọ na-achọ njem "(ABTA).
Gastronomy na-aghọwanye akụkụ bụ isi nke ahụmịhe ndị njem nleta na-abụghị ịbụ onye na-akwado nkwado. Ọ dị mkpa maka ihe ọhụrụ na gastronomy, na-enye nri nri pụrụ iche & pụrụ iche ma na-edebe ịdị ọcha dị elu
Ndị na-eme njem nleta chọrọ mgbanwe ebe ha nwere ike ide ngwaahịa ma ọ bụrụ na ha na-aga ebe ọzọ na-agbanwe agbanwe agbanwe agbanwe. Site na ịnụ ụtọ nri mpaghara iji mee ememme mpaghara na ememme mpaghara, a na-etinye ahụmịhe mpaghara ka ọ bụrụ ụfọdụ n'ime usoro nlegharị anya kachasị elu iji lelee. Enwere ike ịkọwapụta ahụmịhe nke ọma maka ọchịchọ na atụmanya nke onye ahịa, o yikarịrị ka ha ga-alaghachi ma jiri otu ọrụ ahụ ọzọ.
Nkasi Obi Site Technology
Includegụnye ndị nwere nkwarụ anụ ahụ na ọgụgụ isi ible nweta njem nlegharị anya na-eleba anya karịa ndị nwere nkwarụ anụ ahụ na ọgụgụ isi, gụnyere ndị niile nwere mkpa agagharị - gụnyere ndị agadi na ụmụ ọhụrụ n'ofe ndụ mmadụ.
Inweta njem nleta Gbọ njem ahụ gaa na ọnụnọ nke omnichannel na-eduzi ndị na-eme ihe ike site na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ime oghere ndị na-eme njem nlegharị anya, na-enyere ndị obodo ha aka ịmalite njem ndị a gwọrọ na ndị ọzọ ahaziri.
Ihe omuma atu bu ngwa nke Instagramonly nke anakpo njem isii, ebe inwere ike ide akwukwo ndi ozo na Instagram site na akuko ihe ndi ozo ma obu site na njiko ha.
Nkwupụta arụmọrụ arụmọrụ Kenya Kenya - 2019 Pịa ibudata
Kenya bụ mba dị n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa na oke osimiri n'ụsọ Oké Osimiri India. Ọ gụnyere savannah, Lakelands, nnukwu Rift Valley na ugwu ugwu. Ọ bụkwa ebe obibi maka anụ ọhịa dịka ọdụm, enyí, na rhinos. Site na Nairobi, isi obodo, ndị safari na-eleta Maasai Mara Reserve, amaara ama na njem mbata kwa afọ na Amboseli National Park, na-enye echiche nke ugwu 5,895m nke Tanzania. Kilimanjaro.
Hon. Najib Balala bụ onye otu Kọmitii Ndụmọdụ Ndị Na-ahụ Maka Njem Nleta Anya n'Africa
Onye ode akwukwo njem na Kenya Najib Balala, Doris Woerfel CEO ATB, Cuthbert Ncube, Onye isi oche njem nlegharị anya nke Africa